Taariikhda My Butros » Sidee in ay qaadaan talaabooyin Your First Iyadoo Online Dating
Sidee in ay qaadaan talaabooyin Your First Iyadoo Online Dating
Last updated: Jan. 26 2021 | 3 min akhri
Waxaad qaaday keeno Stamford Bridge oo ay diyaar u yihiin in ay bilaabaan raadinta kale oo muhiim ah online. Waa xiiso leh ah, waayo-aragnimo weli cabsi. All si kado ah waxaad haysataa fursad aad si aad u aragto oo la macaamilaan kali more, ka badan waxaad la kulmay sanadkii! Laakiin sugi shukaansiga online ma aha wax la mid ah kulanka dadka in qofka iyo waxa hubaal ah ku iman mayso buugga caadiga ah ...
Faham Vocab ah: Mid ka mid ah tallaabooyinka ugu horreeya oo ugu wareersan yahay lingo ka qabashada. Kuwani waa in aad daqiiqado ugu horreeya ee dhexgalka, nooca aragti samayn aad rabto in aad ka baxdo iyo sida dunida oo dhan ayaad dooran waxa la sameeyo?
Sida in "nolosha dhabta ah" erayada aan u isticmaalno si ay u qeexaan nooc ka mid ah is dhexgalka, sida la isgacan, aaddan sharxaya wixii hadda ka dhacay inta u dhexeysa laba qof. Fikrad Tani weli khusaysaa fursadaha online aad:
Like - Ka fakar sida dhoola ka bar ah. Waxaa laga yaabaa qabsoomayn qof lagu soo jeediyo. Si kastaba ha ahaatee, waxa aanay sidii ku hawlanaa sidii haddii aad ka gudbay oo wuxuu ku yidhi, "Hello."
Gabgab Wink -Qof waxaa kaliya sida ugu dhakhsaha badan u soo diray sidii ay u beeniyay.
Favorite - Tani waa qof in aad la hadashay in line at Starbucks. Waxaad dareemay dhimbiil oo isla markiiba; haa waxaad uun ka hor yimid in maraya, laakiin ma sugi karo inaan isku dhacaan mar kale.
Fariin - Tani waa fariin qoraal ah ka qof "u" aad sugayeen inay maqlaan ka maalinta oo dhan ah. Waxay gebi tahay aad galay.
In doorasho la sameeyo sidii ay u wada xiriiraan go'aan ka gaari kara nooca dareen-celin aad u hesho.
Shoogga iyo yaabiyo: Haddii aad u baahan tahay inaad akhrido dhowr profiles hor idinkaa iska qoraal, taasi waa Okay.
– Waa adag tahay in la ogaado waxa la mid ah ee profile a iyo inta haddii aad ku cusub tahay shukaansiga online. Idinkuna ma waxaad doonaysaan in ay qoraan haiku a, laakiin aadan rabin in dadka u dhashay ilmada la faahfaahinta sheegid naaxariista fasalka 5aad biyaano.
– Hubi inaad siiso faahfaahinta shakhsiga ah, waxaa jira dad kun jecel movies oo doonaya in la helo jaal dambiyada,'Waxa ay dhab ahaantii kala duwan oo adiga kugu saabsan? (Ma waxaad u tagtaa dugsiga cajiin oo hadda ka shaqeeya suuq-. Waxaa laga yaabaa, aad dhawaan soo gaaray parasailing?)
– Qeex waxa aad raadineyso weeyna in la Wadaage, Haddii aadan siinin dadka u malaynayso in aad profile waa been abuur ah.
Noqo Farta: Waxaad ku biiray shukaansiga online in aanay noqon wallflower ah, aad rabto in aad hesho qof!
– Waxaad wax ay lumiso! Waa maxay fursadaha aad ku ordi doonaa qofkan? Zero in midkoodna; ma u gabgab leeyihiin iyaga at, haddii aad rabto in aad si dhab ah fariin.
– Ha shaki hoose ku guuleysan. marnaba ma ogid ee laga yaabo inay xiiseynayaan aad ee, haddii aad u siin tijaabinin. ma waxaad ku biiri shukaansi online in geeska fadhiisan oo xidhantay aad sameeyey? Haddii aad, Waxaan qabaa inaad tahay website-ka qaldan.
Isku day inaad wax cusub: Ma jiraan wax qalad ah la og "aad nooca uu yahay,"Laakiin isku day qof oo kala duwan ka soo qaatay xidhiidhadho hore iyo aad hadlaya.
Marka aad leedahay kumanaan fursadaha raadinaya aad ee ka soo iftiimay aad shaashadda computer, waxaa jira wax qalad ah la biyaha ku jirrabaya si ay u bartaan waxa aad rabto. Waxaa laga yaabaa, aad shukaansi la saxda ah iyo garasho, "Waxaan kaliya qof ay sanka honks nool a ma noqon karaan." Ma jiraan wax ka qaldan in uu yahay, ama waxaa laga yaabaa in aad bartaan taasi waxa weeye waxa aad la sugayay oo dhan. Ma ogid waxa dhici kara.
Naftaada: Sida Dr. Seuss ku rid, "Waxaan ahay qofka aan ahay iyo in ay tahay wax weyn u noqon." Haddii Dr. Seuss u sheegay, waxa uu helay in ay xaq u. Way adag tahay inuu ku soo bilowdo xiriir qof haddii aad isku dayaya in ay iska dhigaya inay yihiin qof kale.
Haa "hottie8675309" waa kuwo aad u soo jiidasho, laakiin aadan heli karin wax ay profile aad qabto ee caadiga ah. Waxaad moodin inaad adiga qudhaadu, "Waa hagaag ay magacaabo 'The Canab oo Cadaabka ' sida ay buugga uu jecelyahay. Waxaan qabaa akhriyay in dugsiga sare. "Ka hor inta aadan u ogaato inaad taariikhda qof qaba qoray PhD Proud ay ku saabsan 'The Canab oo Cadaabka. ' Nasiib wacan oo wanaagsan in!